क्यान सफ्टटेक भदौ २९ देखि | गृहपृष्ठ
Home बजार क्यान सफ्टटेक भदौ २९ देखि
क्यान सफ्टटेक भदौ २९ देखि
भदौ १५, काठमाडौं (अस)। कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) ले ‘क्यान सफ्टटेक २०११’ आयोजना गर्ने भएको छ । प्रदर्शनी यही भदौ २९ देखि असोज १ गतेसम्म आयोजना हुने क्यानले बिहीवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेण्टरको डाइरेक्शन एक्जिविशन एण्ड कन्भेन्शन सेण्टर (डीईसीसी)मा आयोजना हुने प्रदशनीमा ६३ ओटा स्टल रहनेछन् । सन् २००७ देखि आयोजना हुँदै आएको प्रदशनीको यो चौथो संस्करण हो ।
स्वदेशी तथा विदेशी सफ्टवेयर, सोलुशन तथा सर्भिस कम्पनीहरूले प्रदशनीमा भाग लिने दाबी क्यानको छ । टाइटल स्पोन्सर मिदास रहकोले प्रदशनीको नाम नै ‘मिदास क्यान सफ्टटेक २०११’ राखिएको क्यानले जानकारी दिएको छ । ‘प्रदर्शनीबाट सफ्टवेयर, सोलुशन र सर्भिसेसको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ क्यानका महासचिव नारायण न्यौपानेले बताए ।
क्यानका अनुसार ६३ स्टलमध्ये हालसम्म ८० प्रतिशत स्टल बुकिङ भइसकेका छन्, जसमा सफ्टवेयरको क्षेत्रमा शिक्षा, कम्प्युटर सुरक्षा, बैङ्किङ, सूचना व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापनका स्टल छन् । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा टेलिकम सेवा, इण्टरनेट सेवा र सोलुशनको क्षेत्रमा सेक्युरिटी सोलुशन, वायरलेस सोलुशनसँग सम्बन्धित स्टल रहने क्यानले जानकारी दिएको छ । प्रदशनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरिरहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अभ्याससँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको प्रदशनी प्रमुख आकर्षण हुने क्यानको दाबी छ । यसपटकको प्रदर्शनीमा बङ्गलादेशको बङ्गलादेश कम्प्युटर समिति तथा भारतबाट निट टेक्नोलोजी र माइण्ड मिलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सफ्टवेयर कम्पनीको सहभागिता हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
प्रदर्शनीमा सिल्भर स्पोन्सर रहेको सिल्भरक्रेष्ट प्रालिले ईसेट एण्टिभाइरसको भसन पाँच प्रदशन गर्ने भएको छ । सेप्टेम्बर १३ बाट सार्वजनिक हुने यो भसनदेखि युनिलाइसेन्स हुने भएकाले सोही प्रदशनीमाईसेट भसन चारका प्रयोगकर्तालाई भसन पाँच नि:शुल्क अपडेट गरिदिने बताइएको छ । त्यस्तै, प्रदशनीमा अर्को सिल्भर स्पोन्सर रहेको तारा इण्टरनेशनलले बिटडिफेण्डर एण्टिभाइरसको ‘अटो पाइलट साइलेण्ट सेक्युरिटी’ विशेषता भएको भसन २०११ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । त्यस्तै यो प्रदशनीको एक हप्ता अघिदेखि नै ईबजएशियाले सबै प्रदशनीकर्ताको जानकारी लिई बेवसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तै, प्रदशनीको जानकारी एसएमएसबाट समेत लिन सकिने क्यानले बताएको छ । प्रदशनीको अवसरमा भदौ १६ गते डिजिटल इम्पावरमेण्ट इण्डियाको सहयोगमा क्यानले एकदिवसीय सेमिनारको आयोजना गर्ने भएको छ । त्यस्तै प्रदशनीकै अवसर पारेर क्यानले युरेका म्यानेजमेण्टको आयोजनामा इण्टरनेट सेक्युरिटिज थ्रेट र कम्प्युटर ह्याकिङसम्बन्धी तीनदिवसीय कार्यशालासमेत आयोजना गर्ने भएको छ । ५० हजार अवलोकनकर्ताको अपेक्षा गरिएको प्रदशनीको प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बुलेट क्लबको काठमाडौं-ताप्लेजुङ र्याली
भदौ १५, काठमाडौं (अस) । रोयल इनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकल बाहकहरूको साझा सङ्गठन ‘नासा बुलेट क्लब’को आयोजनामा काठमाडौंदेखि ताप्लेजुङसम्मको सातदिने बुलेट मोटरसाइकल र्याली हुने भएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त र्यालीको आयोजना गरिने भएको क्लबका अध्यक्ष प्रकाश लिम्बूले बताए । ‘बुलेट बाहकको यात्रा पर्यटन प्रवर्द्धन सर्वत्र’ भन्ने नाराका साथ यही भदौ २२ देखि २८ गतेसम्म सो र्याली गरिने उनले जानकारी दिए ।
बिहीवार राजधानीमा आयेजित पत्रकार सम्मेलनमा क्लबले र्यालीबारे जानकारी दिएको हो । र्याली काठमाडौंबाट काभ्रे, सिन्धुली, सिराहा, धरान, बिर्तामोड, इलाम, फिदिम, कावेली हुँदै ताप्लेजुङको फुङिलङ बजारसम्म पुग्नेछ । ताप्लेजुङ पुगेपछि र्यालीले ताप्लेजुङ उवासङ्घ, होटल व्यवसायी, पत्रकार महासङ्घ र महिला तथा युवालगायत स्थानीय सङ्घसंस्थाले गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाउनेछ । नासा बुलेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको तथा नेपाल अटोमोबाइल स्पोर्ट्स एशोसिएशनमा आबद्ध भएको क्लब हो ।
बेलायतले १ सय ४० गोर्खा सैनिकलाई हटाउने
भदौ १५, काठमाडौं (अस) । बेलायती सेनाले १ सय ४० जना गोरखा सैनिकहरूलाई हटाउने भएको छ । मुलुकको सैनिक सङ्ख्यामा कटौती गर्ने घोषणासँगै गोरखा सैनिकलाई पनि हटाउने निर्णय भएका काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासद्वारा बिहीवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बेलायतको प्रतिरक्षा क्षेत्रको पुनसंरचना गर्ने उद्देश्यले गरिएको एक पुनरावलोकनपछि सैनिक सङ्ख्यामा कटौती गरिने भएको हो । हाल कायम १ लाख सङ्ख्याको फौजमा ७ हजारले घटाएर सन् २०१५ सम्ममा ९३ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्ख्या कटौतीको पहिलो शृङ्खलामा गोरखा सैनिकहरूलाई हटाउने दूतावासले बताएको छ । हटाइने सैनिकहरूलाई १ वर्षअगाडि नै सूचना दिइने तथा पुनर्वासको लागि समय दिइने पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ । पुरानाहरूको सङ्ख्या कटौती गरिने भए पनि नेपालबाट नयाँ गोर्खा सैनिक भर्ती भने जारी नै राखिने दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
सिन्धुलीमा रू. ९ करोड सुरक्षा भत्ता वितरण
भदौ १५, सिन्धुली (अस) । आर्थिक वर्ष२०६७/०६८ मा सिन्धुलीका १३ हजार ३ सय ८१ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेका छन् । स्थानीय निकायअन्तर्गत जिल्लाका ५३ गाविस कार्यालयमार्फत उनीहरूले रू. ८ करोड ९३ लाख ३६ हजार १ सय सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार ३ हजार ३ सय ४ जना महिला तथा ४ हजार २ सय १० जना पुरुष गरी कुल ७ हजार ५ सय १४ जनाले ज्येेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भक्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, ३ हजार ८ सय ३९ जना एकल महिलाले पनि भत्ता पाएका छन् । लोपोन्मुख जातिअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेमा १ हजार ६ सय ७३ जना रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
जिल्लाका ३ सय पूर्ण अपाङ्ग र ५५ आंशिक अपाङगले पनि गत आवमा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको जिविसका खरिदार रिता खड्काले बताइन् । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग तथा एकल महिला सुरक्षा भत्ताका लागि गत आवमा १० करोड ५९ लाख ६० हजार बजेट जिल्ला विकास समितिमा आएको भए पनि ८ करोड ९३ लाख ३६ हजार १ सय रुपैयाँमात्र वितरण गरिएको जिविसले जानकारी दियो ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जिल्लाका १७ जना प्रकोप पीडित र एक जना द्वन्द्व पीडितलाई राहत प्रदान गरेको छ । वर्षाका कारण घरमा भएको क्षतिका आधारमा सिन्धुलीका विभिन्न गाविसका १७ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैवीप्रकोप राहत कोषबाट रू. ३० हजार उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निवेदनका आधारमा कपिलाकोट गाविस ९ का टीकाजङ्ग थापालाई रू. २ लाख ७८ हजार ६ सय ८० सहयोग प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विमलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘सोल्टी क्राउन प्लाजा ओपन गल्फ टुर्नामेण्ट २०११’
भदौ १५, काठमाडौं (अस) । ‘सोल्टी क्राउन प्लाजा ९ होल ओपन गल्फ टुर्नामेण्ट २०११’ भोलि शनिवार हुने भएको छ । यो प्रतियोगिता रोयल नेपाल गल्फ क्लबको सहयोगमा सोल्टी क्राउन प्लाजाले आयोजना गर्न लागेको हो । रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुने यो प्रतियोगिता ७/८ ह्याण्डिक्यापसहित स्टेबलफोर्ड फर्म्याटमा हुने बताइएको छ ।
गल्फलाई सामाजिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको सोल्टी होटल लिमिटेडका निर्देशक विजयबहादुर श्रेष्ठले बताए । प्रतियोगिताबाट विभिन्न श्रेणीका विजेता घोषणा गरिने आयोजकले बताएको छ ।
प्रतियोगिताका ओभरअल विजेताले आफ्नो एक जना साथीसँगै कतार एयरवेजको अन्तरराष्ट्रिय अन-लाइन नेटवर्कको कुनै पनि गन्तव्यमा आते-जाते टिकट प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, इण्टर कण्टिनेण्टल दोहामा बेड एण्ड ब्रेकफाष्ट बेसिसमा दुई रातको बसाइका साथै दोहा गोल्फ क्लबमा च्याम्पियनशीप राउण्ड खेल्न पाउनेछन् । त्यस्तै, विजेताहरूलाई अन्य आकर्षक पुरस्कारसमेत प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रमलाई कोकाकोला, कार्ल्सबर्ग बियर, सिग्नेचर ह्विस्की, तथा शिखर इन्स्योरेन्सलगायतले सहप्रायोजन गरेका छन् ।
दाउरा र ग्यासको विकल्पमा ब्रिकेट उत्पादन
भदौ १५, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाका ५ गाविसका बासिन्दाले ब्रिकेट (कोइला)को उत्पादन बढाएका छन् । दाउरा र ग्यासको विकल्पमा ब्रिकेटले तराईका जिल्लामा राम्रो बजार लिन थालेपछि सङ्खुवासभामा यसको उत्पादन बढाइएको हो । ब्रिकेटको माग मोरङ र सुनसरीबाट बढी आउने गरेको ब्रिकेट उत्पादक चैनपुर ४ का रामप्रसाद पौडेल बताउँछन् । जिल्लामा २० जनाभन्दा बढीले ब्रिकेट उत्पादन गरिरहेको उनले बताए । ब्रिकेटको उत्पादनपछि चैनपुर बजारमा आजकाल दाउराको किनबेच हुन छाडेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ चैनपुरका अध्यक्ष आशिष शाक्यले बताए ।
तीन वर्षअघि जिल्लाको चैनपुर बजारबाट शुरू गरिएको ब्रिकेट उत्पादन यस वर्षबाट खराङ, बानेश्वर, सिद्धकाली र सिद्धपोखरी गाविसमासमेत शुरू भएको छ । साधारण मेशिनको प्रयोगबाट नै उत्पादन गर्न सकिने ब्रिकेट राम्रो मूल्यमा विक्री हुन थालेपछि यसको उत्पादनमा कृषकहरूको आकर्षण बढेको खराङ-८ लोहाकोटका लक्ष्मण चौहानले बताए । अहिले रू. १५ देखि ३५ सम्मका ब्रिकेट उत्पादन भइरहेका छन् । मागअनुरूपको ब्रिकेट पाइन थालेपछि दाउरा बाल्दै आएका जिल्लाको चैनपुर बजारका स्थानीयहरूले समेत ब्रिकेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । २० सेण्टिमिटर लामो फलामे रडको प्रयोग गरी बनाइएको माटाको चुलोमा ब्रिकेट सल्काएर खाना बनाउँदा धूवाँ नआउने यो मानव स्वास्थ्य र वनजङ्गलको सुरक्षामा लाभकारी भएको छ ।
ब्रिकेट उत्पादन गर्ने तरीका सम्झाउँदै पौडेल भन्छन्, ‘सुकेका पातपतिङ्गर एउटा खाल्डोमा जम्मा गरी कोइला रहने गरी डढाइन्छ । त्यही कोइलालाई पिसेर धूलो पारी पानी, माटो र बालुवा मिसाएर डल्ला बनाइ फलामे साँचोमा राखेर ब्रिकेट तयार गरिन्छ ।’ गाउँगाउँबाट चैनपुर बजारमा जम्मा भएको ब्रिकेट ट्रकमार्फत तराईका बजारमा पुग्ने गरेको ब्रिकेट व्यापारी उमेश डाँगी बताउँछन् । ब्रिकेटको उत्पादनपछि चैनपुर बजारमा आजकाल दाउराको किनबेच हुन छाडेको भनाइ उद्योग वाणिज्य सङ्घ चैनपुरका अध्यक्ष आशिष शाक्यको छ ।
त्रिपुरेश्वरमा यामाहा बाइक स्टेशन
नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता मोरङ अटो वर्क्स इण्टरप्राइजेजले त्रिपुरेश्वरमा सर्भिस सेण्टरसहितको यामाहा बाइक स्टेशन स्थापना गरेको छ । बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रममा इण्डिया यामाहा मोटस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हिरोयुकी सुजुकीले शो-रूमको उद्घाटन गरे । उक्त शो-रूम उत्कृष्ट सेवा, सुविधा तथा पार्ट्स (थ्रीएस) उपलब्ध गराउने डिलर रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
बाइक स्टेशनमा जापान, भारत, थाइल्याण्ड तथा चीनमा निर्मित सबै प्रकारका मोटरसाइल उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो शो-रूम प्रविधिक रूपमा नेपालकै सुविधासम्पन्न रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
शो-रूममा मोटरसाइकल खरीद गर्न आउने ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर इन्ष्टयाण्ट फाइनान्स डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त डेस्कले ग्राहकहरूलाई सरल तथा उचित ब्याजदरमा मोटरसाइकलको तुरुन्तै फाइनान्स गरिदिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, उचित मूल्यमा मोटरसाइकल एक्सचेञ्ज सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । वर्क्सशपमा १ सयदेखि १ हजार सीसीसम्मको बाइक एकैपटक सर्भिसिङ गर्न मिल्ने १८ स्वचालित वेहरू रहेका छन् । यहाँ मोटरसाइकलको सर्भिसिङमा अधिकांश क्रियाकलप मेशिनबाट गरिने बताइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको दशैं-तिहार छूट योजना
नजिकिँदै गरेको दशैं, तिहार र छठको अवसरमा स्मार्ट सेलले छूट योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म बिजनेश आवरको कलमा छूट प्रदान गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
ग्राहकहरूलाई सो योजनाअन्तर्गत स्मार्ट सेलबाट स्मार्ट नेटवर्कमा कल गर्दा १ दशमलव ५० रुपैयाँ प्रतिमिनेट र अन्य अपरेटरका कल गर्दा रू.२ प्रतिमिनेट दर कायम गरिएको छ । अफ आवर रेट यथावतै कायम गरिएको छ, । त्यस्तै, अन्तररष्ट्रिय कल महशुलमा पनि स्मार्ट टेलिकमले छूटको योजना ल्याएको बताएको छ, जसअन्तर्गत अव भारतमा एसेस कोड १३५० डायल गरी कल गर्दा प्रतिमिनेट रू. ३ लाग्ने छ भने मलेसिया, दक्षिण कोरिया कल गर्दा रू. ६ प्रतिमिनेट कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सउदी अरेबिया कल गर्दा रू. १२ प्रतिमिनेट र कतारका लागि रू. १५ प्रतिमिनेट लाग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । योजना कात्तिक १५ गतेसम्म लागू हुने जानकारी दिइएको छ । उल्लिखित दर करबाहेक भएको कम्पनीले बताएको छ ।
एपेक्सको ११ औं वार्षिकोत्सव
एपेक्स कलेजले आफ्नो ११ औं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कलेजले बिहीवार प्रज्ञप्रतिष्ठानमा मिस एपेक्स तथा मिष्टर एपेक्सको आयोजना गर्यो । सो प्रतियोगितामा अनुप सापकोटा मिष्टर एपेक्स तथा स्मृति विष्ट मिसेस ऐपेक्स भए । त्यसैगरी, नृत्य प्रतियोगितामा स्मृति विष्ट उत्कृष्ट र मोष्ट टयालेण्टमा नेलिश कुँवर उत्कृष्ट भए । कार्यक्रममा वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट हुने र विभिन्न प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका २ सय बढी विद्यार्थीलाई पुरस्कृतसमेत गरिएको थियो ।
कुमारी बैङ्कको स्वास्थ्य शिविर
कुमारी बैङ्क लिमिटेडले तीजको अवसरमा पशुपति दर्शनमा आउने दर्शनार्थीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले बुधवार स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गर्यो । संस्थागत सामाजिक सेवाअन्तर्गत आयोजित उक्त शिविरमा १ सय ३० बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिइएको बैङ्कले बताएको छ ।
अत्यधिक गर्मी र भोको बसेका कारणले आकस्मिक सेवा आवश्यक परेका बिरामी बढी मात्रामा शिविरमा आएका थिए । विगतमा पनि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै बैङ्कले आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सिटिजन्स पोखरामा सन्ध्याकालीन सेवा
सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनल लिमिटेडले पोखराको न्यूरोडमा रहेको आफ्नो शाखाबाट सन्ध्याकालीन सेवा शुरू गरेको छ । ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बिहीवारदेखि यो सेवा शुरू गरिएको शाखा प्रबन्धक नारायणराज अधिकारीले जानकारी दिए । अबदेखि शाखाको काउण्टर साँझ ७ बजोसम्म खुला रहनेछ । २० औं वाणिज्य बैङ्कका रूपमा स्थापित सिटिजन्स बैङ्क इण्टरनेशनलले २०६४ फागुण २३ गतेबाट पर्यटकीय नगरी पोखराबाट आफ्नो सेवा शुरू गरेको हो । यसशाखाबाट बचत तथा ऋण सेवाका साथै एटीएम, रेमिटयान्स, ड्राफ्ट, लकर सुविधालगायत बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । हाल सिटिजन्सका ३२ शाखा तथा २९ ओटा एटीएम सञ्चालनमा छन् ।
गण्डकीले १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
गण्डकी विकास बैङ्क लिमिटेडले आव २०६७/६८ को सञ्चित मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सो बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा बैङ्कको आठौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरिने बैङ्क सञ्चालन समितिले जानकारी दिएको छ । बैङ्ले आव २०६७/६८ मा रू. ६ करोड ५३ लाख मुनाफा आर्जन गरेको छ । सोही अवधिमा बैङ्कले रू. १ अर्ब ५८ करोड निक्षेप सङ्कलन तथा रू. १ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको बैङ्कका वरिष्ठ प्रबन्धक छविन्द्र शर्माले जानकारी दिए । हाल बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २० करोड रहेको छ ।
राजविराजमा स्ट्याण्डर्डको शाखा
स्ट्याण्डर्ड फाइनान्स लिमिटेडले राजविराजमा शाखा स्थापना गरेको छ । यससँगै फाइनान्सको शाखा १३ पुगेको छ । बुधवार आयोजित एक समारोहबीच संस्थाका सञ्चालक डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले शाखाको उद्घाटन गरे । फाइनान्सले निकट भविष्यमै सल्यानमा पनि शाखा स्थापना गर्ने भएको छ । सल्यानका साथै बैङ्किङ सुविधा नपुगेका कतिपय क्षेत्रमा शाखा स्थापनाको तयारी भइरहेको संस्थाले जानकारी दिएको छ । १६ वर्षअघि स्थापना भएको फाइनान्सले एससीटी नेर्टवर्कमा आबद्ध सबै एटीएमबाट महीनामा ६ पटकसम्म नि:शुल्क रकम झिक्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
‘नाडा अटो शो २०११’ भदौ २१ देखि
राजधानीमा भदौ २१ गतेदेखि ‘नाडा अटो शो २०११’ हुने भएको छ । सवारीसाधन, तिनका पाटपुर्जा र लुब्रिकेण्ट्सका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले गरिने उक्त प्रदर्शनीको संयोजन अटोमोबाइल डिलस एशोसिएशनले गर्ने भएको छ । पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनीमा नेपालमा भित्रिएका र भित्रिने क्रममा रहेका सवारीसाधन, तिनका पाटपुर्जा लुब्रिकेण्ट्सलगायतका बारेमा जानकारी दिइने एशोसिएशनका अध्यक्ष सौरव ज्योतिले बताए । १ सय स्टल राखिने उक्त प्रदर्शनीमा नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, भारत, जर्मन, अमेरिकालगायत १५ देशका अटोमोबाइल्स कम्पनीले भाग लिने उनले जानकारी दिए ।